အရက်သောက်ခြင်း၊ ဖော်ပြချက်၊ မီနူး၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်များ - Keto Eat&Fit
ကျောင်းစကတည်းကလူတစ် ဦး တွင်အရည် ၈၀% ပါ ၀ င်သည်ကိုသတိရသည်၊ ထို့ကြောင့်အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ဆရာဝန်များနှင့်အာဟာရပညာရှင်တို့ကအစာချေဖျက်မှုမြန်ဆန်ခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်ဇီဝြဖစ်မှုအတွက်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးအရည် ၂. ၅ လီတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သောက်ရန်အကြံပြုသည်။အချို့ဆရာဝန်များသည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အစာရှောင်သည့်ရက်များစီစဉ်ရန်အကြံပြုသော်လည်းအချို့ကလူများအားခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူပိုကောင်းသောပေါင်အပိုဆုံးရှုံးစေသည်။
အချိုရည်သောက်ခြင်းသည်၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုနှင့်ကောင်းကျိုးများစွာကြောင့် dieters များအကြားလူကြိုက်များမှုပိုများလာသည်။ဆရာဝန်များစွာသည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၏ဝေဖန်မှုကိုမိမိကိုယ်ကိုချေးငှားသော်လည်းနည်းပညာ၏ထိရောက်မှုကိုမငြင်းနိုင်ပါ။တစ်လအတွင်းမီနူးမှအစိုင်အခဲအစားအစာများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအရည်နှင့်ဖြည့်ပါကပိုလျှံသောအလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ်အထိဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ထို့အပြင် ၁၀ ရက်စက်ဝန်းတစ်ခုစီသည်ခန္ဓာကိုယ်၊ သွေးစီးဆင်းမှု၊ အတွင်းပိုင်းအင်္ဂါများနှင့်ဆဲလ်များကိုသန့်ရှင်းစေသည်။အရည်ပါသောအစားအစာများသည်ခန္ဓာကိုယ်မှအဆိပ်အတောက်များ၊ free radicals များနှင့်အခြားဒြပ်ပေါင်းများ၊ အဆိပ်များ၊ ပျက်စီးယိုယွင်းထုတ်ကုန်များ၊ ပိုလျှံသောဆားများအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ကူညီသည်။
တိုးတက်လာသောမီနူးကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရန်၊ အစိုင်အခဲအစားအစာများကိုလုံး ၀ မငြင်းဘဲသင့်ကိုယ်ပိုင်အစားအစာကိုရေးဖွဲ့ရန်ကျန်းမာသောအရည်များကိုသာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
အရည်များအပြင်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးအရည် ၂ လီတာကိုသေချာသောက်ပါ။
အရက်သောက်သည့်အစားအစာတွင်ပါသောအစာသည်အပိုင်းငယ် ဖြစ်၍ တစ်နေ့လျှင်အဆာပြေ ၄-၅ လုံးခန့်စားသင့်သည်။
အစားအစာများကိုအလွန်အကျွံစားခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ အဆီနှင့်ကြွက်သားများလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်အသံတိုးလာခြင်းတို့ကြောင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုကန့်သတ်ရန်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအရှိန်ကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။
သင့်ရဲ့အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုခြေရာခံဖို့အရေးကြီးတယ်။အရက်သောက်နေစဉ်အတွင်းလူတစ် ဦး သည်နေ့တိုင်းဝမ်းသွားရမည်၊ မဟုတ်လျှင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသန့်ရှင်းစေသောဝမ်းချူဆေးများသို့မဟုတ်ဝမ်းနုတ်ဆေးများကိုအနည်းငယ်သောက်ပေးပါ။
သောက်သုံးသောအစာသည်ဖက်တီးအက်ဆစ်များ၊ ပရိုတိန်းများ၊ ဗီတာမင်များ၊ မိုက်ခရိုများနှင့်မက်ခရိုဒြပ်စင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များချို့တဲ့သည်။အစာစားနေစဉ်ဗီတာမင်နှင့်ဓာတ်သတ္တုများ၊ ငါးတောင့်များနှင့်အခြားအစားအစာဖြည့်စွက်စာများကိုထပ်မံသောက်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
အစာ၏ကာလကိုတင်းကြပ်စွာသတိပြုသင့်သည်၊ ၎င်းထက်မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာအစာပြန်စားနိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့်အစာရှောင်ရက်များ (တစ်ပတ်လျှင် ၁ ရက်) သည်ကျန်းမာရေး၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်လှပသောပုံကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
အဓိကဟင်းလျာများ ၀ ယ်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်အနည်းဆုံးကြာသည်။
ဆယ်လူလာအဆင့်တွင်ခန္ဓာကိုယ်အားအပြည့်အ ၀ သန့်စင်ရန်ကူညီသည်၊ အစာခြေဖျက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်၊ အစာခြေဖျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးခြင်း၊ မျက်နှာကိုပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်း၊ အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့်လက်သည်းအခြေအနေကို (အပိုဗီတာမင်နှင့်ဓာတ်သတ္တုရှုပ်ထွေးသောအရာများအားယူသည်)
နွေရာသီအားလပ်ရက် (သို့) အရေးကြီးပွဲတစ်ခုမတိုင်မီအရေးကြီးသောကိုယ်အလေးချိန်အလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်သည်။
အစားအစာ၏ပထမ ၁၀ ရက်ပြီးနောက်သင်စွမ်းအင်နှင့်တက်ကြွမှု၊ သုခချမ်းသာနှင့်စိတ်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကိုသင်ခံစားရလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့လူတစ် ဦး ဟာအစိုင်အခဲကိုအချိန်ကြာကြာမစားနိုင်ဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့လိုသလိုအရည်များများစားဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုကအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းနဲ့အခြားအတွင်းအင်္ဂါတွေမှာပြဿနာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။အချိုရည်မသောက်မီသင်တက်ရောက်နေသည့်ဆရာဝန်များကပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုကိုခံယူသင့်ပြီးအပတ်စဉ်သက်သာသောရွေးချယ်မှုဖြင့်စတင်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် menu ကိုရေးဖွဲ့ရန်နှင့်အစာစားခြင်း၏အခြေခံကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားအစာအတွက်ရနိုင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဆားမပါသောတွင်းထွက်ရေ (တစ်နေ့ ၂ လီတာအထိ)
ကြက်၊ ငါး၊ offal၊ အနီရောင်အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါ်တွင်သဘာဝအိမ်လုပ်ဟင်းရည်များ
နို့နှင့်အချဉ်ဖောက်ထားသောနို့များသည်အဆီ 2-2. 5% အထိရှိသည်။
အနံ့အရသာနှင့်အပိုပစ္စည်းများမပါသောသဘာဝလက်ဖက်ရည်များ (သကြား၊ ပျားရည်)
ခွင့်ပြုထားသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုငါတို့ရှာဖွေခဲ့သည်၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့သောက်နေစဉ်အတွင်းအမျိုးအစားအလိုက် "ခွင့်မပြု" သောပိုအထင်ကြီးစရာစာရင်းတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
မည်သည့်အစိုင်အခဲနှင့်မဆိုအစိုင်အခဲ (အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ စွပ်ပြုတ်စသည်) အစားအစာ၊
အပိုပစ္စည်းများ (ဆား၊ သကြား၊ ကစီဓာတ်၊ အရသာပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ တည်ငြိမ်စေခြင်း၊ ကြာရှည်ခံစေခြင်း၊ အချိုဓာတ်နှင့်အခြားအရာများ)၊
ငံပြာရည်, gravies, mayonnaise, ketchup, marinades, စည်သွတ်အစားအစာ
တနင်္လာနေ့။တစ်နေ့လုံးကျွန်ုပ်တို့သည်အဆီနည်းသောနို့များနှင့်အချဉ်နို့ထုတ်ကုန်များ (အချဉ်ဖုတ်ထားသောနို့၊ kefir၊ အိမ်လုပ်အချိုမပါသောဒိန်ချဉ်၊ နို့) ကိုသောက်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။သကြားမပါသောအိမ်လုပ် compotes များပါ ၀ င်သောသဘာဝနူးညံ့သောသစ်သီးများနှင့်ဘယ်ရီသီးများပါ ၀ င်သည်။
သောကြာ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်တူပြုခြင်းအပြင်၊ ငါတို့သည်အခြောက်သစ်သီး uzvar ကိုအစားအစာထဲသို့မိတ်ဆက်သည်။
စနေနေ့။သန့်ရှင်းသောနေ့တစ်နေ့၊ oatmeal သို့မဟုတ် flakes တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအထူးဂျယ်လီကိုကျွန်ုပ်တို့သောက်သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့။ငါတို့ကတနင်္လာနေ့မှာဒီရက်ကိုအတိအကျလုပ်တယ်၊ နောက်ဆုံးအရည်နဲ့သရေစာအစားငါတို့ကအဆီနည်းအိမ်သားဒိန်ခဲဒါမှမဟုတ်နူးညံ့တဲ့အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ casserole ကိုနည်းနည်းထည့်နိုင်တယ်။
တစ်ပတ်လောက်အစာစားပြီးတိုင်းမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းသန့်စင်ပေးပြီးပိုလျှံတဲ့ကိုယ်အလေးချိန် ၅ ကီလိုဂရမ်အထိကျသွားနိုင်တယ်၊ ပိုလျှံနေတဲ့ရေနဲ့ဖောင်းကားမှုကပျောက်သွားလိမ့်မယ်၊ အစာခြေဖျက်မှုနဲ့ဝမ်းကပုံမှန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
၁၀ ရက်ကြာသောအစားအစာ၏ပထမအဆင့်တွင်အခေါင်းပေါက်များအားလုံးကိုအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးနှင့်သည်းခြေအိတ်တို့၌သန့်ရှင်းစေသည်။ဤကာလအတွင်းလျှာပေါ်တွင်မနှစ်မြို့ဖွယ် plaque တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သွားပွတ်တံ၏အထူးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ဖယ်ရှားရမည်။ပထမအဆင့်တွင်ခန္ဓာကိုယ်သည်ပုံမှန် menu တွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်လျောညီထွေရှိရန်ခက်ခဲသည်၊ ထို့ကြောင့်ဧည့်သည်များနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များသို့လှည့်လည်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်၊ အရသာရှိသောသရေစာများမကိုင်ပါနှင့်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအရသာများကိုမချက်ပြုတ်ပါနှင့်။အထွက်ကျခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်၊ ထို့ကြောင့်အစိုင်အခဲအစာပုံစံ၌မည်သည့်သွေးဆောင်မှုကိုမဆိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
သန့်စင်ခြင်း၏ဒုတိယအဆင့် (၁၀ ရက်) သည်ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး၊ အဆုတ်၊ အသည်း၊ နှလုံးအိတ် (pericardium)၊ သရက်ရွက်ကိုသာအဓိကတာဝန်ရှိသည်။ဒုတိယအဆင့်တွင်ဤအင်္ဂါများတည်ရှိသောနေရာတွင်အနည်းငယ်မသက်မသာခံစားရလျှင်မထိတ်လန့်ပါနှင့်။
တတိယအဆင့်သည်ဆဲလ်များအဆင့်တွင်ခန္ဓာကိုယ်အားရှုပ်ထွေးစေသောသန့်ရှင်းရေးနှင့်အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။စည်းမျဉ်းတစ်ခုအရမနှစ်မြို့ဖွယ်အခိုက်အတန့်များနှင့်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်၊ ပေါ့ပါးသောခံစားမှု၊ အားမာန်များပေါ်လာပြီးစွမ်းအင်များထုတ်လွှတ်သည်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်အခြေအနေတိုးတက်လာသည်။
ဒါဆို diet ကိုတိုက်ရိုက်သွားရအောင်။၎င်း၏အဓိကအားသာချက်မှာအဆင်ပြေစေရန်ဖြစ်သည်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကတင်းကျပ်သောစီစဉ်ထားသော menu တစ်ခုတွင်ကန့်သတ်မထားသောအပြင်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတစ်လှည့်စီရောစပ်။ ကိုယ်တိုင်ပေါင်းစပ်ရေးနိုင်သည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ အစားအစာအားလုံးကိုအရည်ပုံစံနှင့်စားသုံးသင့်ပြီးပုံမှန်အချိုရည်များအပြင်၊ အစားအစာတွင်အာလူးကိုနေ့စဉ်ထည့်သင့်သည်။အောက်တွင်ဤကဲ့သို့သောစွပ်ပြုတ်အတွက်ချက်ပြုတ်နည်းတစ်ခု၏ဥပမာကိုငါးနှင့်အသားဟင်းများချက်ပြုတ်ရာတွင်အခြေခံအဖြစ်ယူနိုင်သည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်သန့်စင်ဟင်းချို။၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိန်သောဟင်းရည် ၁ လီတာ (ကြက်သား၊ ဝက်သား) နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစုံ (ငယ်သောအာလူး၊ တရုတ်နံနံ၊ ဘရိုကိုလီ၊ မုန်လာဥနီ၊ ဥယျာဉ်ခြံဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ခေါင်းငရုတ်ကောင်း) တို့လိုအပ်သည်။ချက်ပြုတ်နည်းတွင်ဖော်ပြထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသေချာစွာဆေးကြောပြီးအခွံနွှာပြီးအတုံးသေးသေးလေးများဖြစ်အောင်လှီးဖြတ်ပါ။ဟင်းရည်ကိုဆူအောင်တည်ပါ၊ ထို့နောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့်ပြီးနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသည်အထိပြုတ်ပါ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်၎င်းကိုအနည်းငယ်အအေးခံပြီး blender ထဲသို့ထည့်ပါ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုတစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှုသန့်စင်သော (ကြိတ်ထားသောအချဉ်ဖုတ်ထားသောနို့သို့မဟုတ် kefir နှင့်တူသည်) ။
မနက်စာ။ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆီနည်းသောအချဉ်ရည်နို့ (သို့) သကြားမပါသောအိမ်လုပ်ဒိန်ချဉ်၊ ဖုတ်ထားသောနို့၊ kefir၊ နို့) တစ်ခွက်သောက်သည်။
မုံ့။ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် citrus ကိုမဆိုလတ်ဆတ်စွာသောက်သည်။
ညစာစားပွဲ။သန့်စင်သောဟင်းချိုချက်ပြုတ်ပါ။အချိုရည်ကိုအစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည် (သို့) ဆေးဘက်ဝင်အပင်မပါသောဟင်းရည်တို့ဖြင့်ဆေးကြောပါ။
မုံ့။ကျွန်ုပ်တို့သည် oatmeal jelly (သို့) berry သီးအချိုရည် ၁ ဖန်ခွက်သောက်ပြီးသင်သည်အသီးခြောက် uzvar တစ်ခွက်ကိုသောက်နိုင်သည်။
ညစာစားပွဲ။အနိမ့်ဆုံးအဆီပါဝင်မှုရှိသောအချဉ်ရည်သောက်ထားသောနွားနို့မှနောက်ဆုံးအစာစားရန်ပိုကောင်းသည်၊ kefir ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မီနူးကိုအခြေခံအဖြစ် သုံး၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးနှင့်အာဟာရတန်ဖိုးရရှိစေသည်။အရည်အစာစားသုံးခြင်းသည်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ဆားမပါဘဲမည်သည့်ပမာဏတွင်မဆိုသာမန်ရေကိုသုံးခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။
အရက်သောက်နေစဉ်အတွင်းသင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းကိုခံစားရလျှင် (ပထမ ၁၀ ရက်)၊ နို့စိမ်းလက်ဖက်စိမ်း၊ သံပုရာရည်နှင့်ရေ (သို့) အချိုမပါသောကော်ဖီနှင့်မုန့်တို့ဖြင့်မင်းအစာစားခြင်းကိုသတ်ပစ်နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်နေ့စဉ်နဲ့ပုံမှန်ဖြစ်သင့်တဲ့အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။အကယ်၍ သင်သည်ပုံမှန်ဝမ်းလျှောခြင်း (သို့) ဝမ်းဗိုက်တွင်ရက်ပေါင်းများစွာနေလျှင်အရက်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
ဆုံးရှုံးသွားသောကီလိုဂရမ်များကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြန်နှုန်းဖြင့်ပြန်လာရန်၊ သင်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နှင့်ဂရုတစိုက်သောက်ခြင်းကိုရှောင်သင့်သည်။၁-၃ ပတ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်သည်အစိုင်အခဲအစာများ၊ အပိုင်းအရွယ်အစားများနှင့်ပုံမှန်ထည့်သွင်းထားသောအစာများ (ဆား၊ သကြား) တို့မှနို့ဖြတ်ရန်အချိန်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အစာအိမ်လမ်းကြောင်းပုံမှန်ပြန်ဆန်လာသည်နှင့်အညီအစာအိမ်လမ်းကြောင်းကိုပုန်ကန်နိုင်သည်။ မရ။အစာမထွက်ခြင်းသည်အစားအစာကိုယ်တိုင် (၂ ပတ်နှင့် ၂ လ) ထက်ကြာရှည်သင့်သည်ကိုသတိပြုပါ။
ပထမ ၇ ရက်အတွက်အသားမှုန့်ဟင်းချိုများနှင့်အဆီမပါသောကောက်နှံစာများကိုအစားအစာထဲသို့မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
တစ်ပတ်အကြာတွင်နေ့စဉ်အစားအစာထဲသို့ကြက်ဥ ၁-၂ လုံး၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ casseroles နှင့်ဒိန်ခဲကိတ်များထည့်ပါ။ဒီအပတ်ရဲ့အဆုံးမှာ၊ နူးညံ့ပြီးအရသာရှိတဲ့ pastries တွေကိုဒိန်ခဲလွှာနဲ့ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ပထမအပတ်အတွက်ညစာကို (kefir တစ်ခွက်သို့မဟုတ်အချဉ်ဖောက်ထားသောနို့တစ်ခွက်၊ ပျားရည်နှင့်နွားနို့နွေးနွေး၊ သက်သာစေသောဆေးဖက်ဝင်လက်ဖက်ရည်)
ဒုတိယအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သစ်သီးများကိုအရည်များကိုစီရီရယ်များနှင့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲထဲသို့ထည့်၊ အသုပ်လုပ်၊ စွပ်ပြုတ်များနှင့်ချက်သည်။မနက်စာကိုအရည်ပျော်သောအခြေအနေတွင်ထားခဲ့ရန်အကြံပြုသည် (အချဉ်ရည်နို့သောက်ခြင်း၊ မုန့်နှင့်ကော်ဖီတစ်ခွက်)
စတုတ္ထနှင့်နောက်ဆက်တွဲရက်များတွင် ၇ ရက်တိုင်းအစာရှောင်သောက်ရန် ၁ ရက်လိုအပ်သည်။ထို့ပြင်ကယ်လိုရီနှင့်ကစီဓာတ်ပါသောအစားအစာများကိုကန့်သတ်ပါ၊ အဆီ၊ အကြော်၊ အချို၊ အချိုရည်များနှင့်ကာဗွန်နိတ်ပါသောအချိုရည်များပေါ်တွင်မှီခိုမနေပါနှင့်။
ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ မူးမေ့ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်းနှင့်သတိလစ်မေ့မျောခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်းနှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းနာကျင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဗိုက်ဆာခြင်း၊ အာဟာရမပြည့်ဝခြင်းနှင့်မမျှတသောအစာများသည်ကြွက်သားများလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်စုဆောင်းထားသောအားကစားစွမ်းဆောင်ရည်များဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကျဆင်းခြင်းသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုယိုယွင်းစေသည်၊ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်လေ့လာနေသူများ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုထိခိုက်စေသည်။
အစားအစာသည်အလွန်စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုလိုအပ်ပြီးပြိုကွဲမှုများသည်အထူးသဖြင့်ရက် ၃၀ အစားအစာတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပြင်းထန်သောနာတာရှည်နှင့်ရောင်ရမ်းသောရောဂါများ၊ အထူးသဖြင့်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ (အစာအိမ်နာ၊ colitis၊ အစာအိမ်နာ၊ အချဉ်ဓာတ်မြင့်မားခြင်းနှင့်အခြားအရာများ)၊ အစာခြေအင်္ဂါများ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း၊
သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ဆယ်ကျော်သက် (သို့) ကလေးဘဝ၊